Adɛn na Ebinom Nni Buronya? | A & M
Wiase afanan nyinaa no, nnipa a wɔn dodow rekɔ ɔpepepem abien na afe biara wodi Buronya December 25, na nnipa bɛyɛ ɔpepem 200 nso di Yesu Kristo awoda no January 7. Nnipa ɔpepem pii nso wɔ hɔ a, wɔn de, wonni Buronya koraa. Adɛn ntia?
Ebinom wɔ hɔ a, wonni Kristosom mu. Ebia na wɔwɔ Yudasom mu, Hindusom mu anaa Shintosom mu. Ebinom nso nnye nni sɛ Onyankopɔn wɔ hɔ, na afoforo nso de, ɛno mfa wɔn ho. Ebinom nso mfa nyamesom nyɛ hwee. Saa nnipa yi nyinaa, Buronya ho asɛm yɛ anansesɛm ma wɔn.
Nanso nea ɛyɛ nwonwa wɔ asɛm no ho ne sɛ nnipa a wogye Yesu di no bebree nnye Buronya ho amanne no ntom. Adɛn ntia? Nneɛma bɛyɛ anan bi ntia.
Nea edi kan: Wonnye nni sɛ wɔwoo Yesu December anaa January mu. Bible nka da pɔtee a wɔwoo no. Nea ɛka ara ne sɛ: “Saa bere no, na nguanhwɛfo bi nso wɔ asase no so a wɔwɛn wɔn nguan anadwo wɔ wuram. Amonom hɔ ara Yehowa bɔfo begyinaa wɔn nkyɛn, na . . . ɔbɔfo no ka kyerɛɛ wɔn sɛ: ‘. . . Wɔawo Agyenkwa a ɔne Awurade Kristo no ama mo nnɛ.’”—Luka 2:8-11.
Adanse a ɛwɔ hɔ kyerɛ sɛ wɔwoo Yesu bɛyɛ October mfiase, efisɛ saa bere no na na nguanhwɛfo tumi da wuram anadwo hwɛ wɔn mmoa. Edu December ne January a, saa bere no paa na awɔw mu yɛ den wɔ Betlehem mpɔtam. Enti saa bere no, na nguanhwɛfo taa ka mmoa gu buw mu anadwo na awɔw anne wɔn.
Nea ɛto so abien: Ade biako pɛ a Yesu bɔɔ din sɛ Kristofo nkae ne ne wu, na ɛnyɛ n’awo, na na ɛnyɛ afahyɛ kyenkyenee biara. (Luka 22:19, 20) Yɛnhyɛ no nsow nso sɛ Marko ne Yohane Nsɛmpa no biara nka Yesu awo ho hwee.
Ade biako pɛ a Yesu bɔɔ din sɛ Kristofo nkae ne ne wu, na ɛnyɛ n’awo
Nea ɛto so abiɛsa: Biribiara nni hɔ a ɛkyerɛ sɛ tete Kristofo no dii Kristo awoda. Nanso ne wu de, wɔkaee. (1 Korintofo 11:23-26) Wɔwoo Yesu no, edi boroo mfe 300 ansa na Kristosomfo regye atom sɛ wobedi Buronya December 25. Ɛno mpo, bɛyɛ mfe 350 ni no, England mmarahyɛ baguafo no hyɛɛ mmara sɛ obiara nnni Buronya bio. Massachusetts Bagua Kɛse no nso hyɛɛ saa mmara no bi wɔ United States. Adɛn nti na wɔyɛɛ saa? Nhoma bi a wɔfrɛ no The Battle for Christmas kae sɛ: “Biribiara nni Bible mu anaa abakɔsɛm mu a ɛkyerɛ sɛ wɔwoo Yesu December 25.” Ɛde kaa ho sɛ Protestantfo no fam no, “Buronya nyɛ hwee sɛ abosonsom afahyɛ a wɔde Kristosom adura ho.”
Ɛno de yɛn ba nea ɛto so anan no so: Baabi a afahyɛ no fi no mfata koraa. Ná Roma abosonsomfo di afahyɛ ahorow de kamfo kuayɛ nyame Saturn ne owia nyame Sol Invictus anaa Mithra, na emu na Buronya fi bae. Nnipa asetena ho animdefo Christian Rätsch ne Claudia Müller-Ebeling boom kyerɛw nhoma a wɔato din Pagan Christmas, na wɔkae wom sɛ: “Afahyɛ dedaw a na wodi no afe afe bere a owia san pue no, wɔsesaa mu de dii Kristo awoda, na saa na wɔyɛɛ afahyɛ ne amanne a na ɛwɔ hɔ ansa na Kristosom reba no pii.”
Sɛ wohwɛ nea yɛaka yi nyinaa a, afei woahu nea enti a nokware Kristofo nni Buronya?